Inona avy ireo fomba atao hanehoana ny tranokalanao ho an'ny backlinks?
Raha manontany tena ianao raha mbola velona na tsia ny tranoben'ny rohy, ity lahatsoratra ity dia hanome valiny mazava ho an'ity fanontaniana ity.
Afaka miteny izany amin'ny fahatokiana fa misy fiantraikany goavana amin'ny filaharana sy ny fahefana ny fifandraisana ny fifandraisana. Ny rohy mifototra dia ampiasain'ireo fitaovam-pikarohana mba hamaritana ny maha-mety ny loharanon'ny tranonkala ho an'ny teny fanalahidy izay midadasika - built in wardrobes for sale melbourne.
Raha ny marina, ny tranokalan'ny rohy tsy ara-dalàna ihany no azo raisina ho toy ny maty. Google dia miahy betsaka momba ny kalitaon'ny rohy ety ivelany ary mamantatra ny rafitra fananganana spammy rehetra. Ny rohy tsy ara-boajanahary dia tsy afaka ny ho andro fiasana ho an'ny mpikarakara webmasters rehetra, izay manana andraikitra amin'ny taranaka mpamokatra traikefa amin'ny biolojika. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy dikany ny isan'ny rohy. Taorian'ny fiatombohan'ny Google farany tamin'ny taona 2012, tsy voatery hodinihina avokoa ny lisitry ny backlines rehetra.
Izany no antony horesahantsika ato amin'ity lahatsoratra ity momba ny fananganana rohy ara-organika izay mbola mahasoa amin'ny 2017. Ny votoatin'ny kalitao dia mitondra ny rohy voajanahary voa-endriny. Ny ezaka rehetra ataonao dia ho valisoa amin'ny laharana ambony amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Raha te haka ny fitohanan'ny fifamoivoizana mahazatra ianao, dia mila manamboatra karazan'antoko samihafa mahaleo tena sy mahazatra.
Mba hampiakarana ny fahefam-pahefana misy anao, dia mila manorina rohy amin'ny loharanom-baovaon'ny PR izay sarobidy indrindra amin'ny Google ianao. Raha ny fitsipika, dia toa sarotra ny mamorona rohy amin'ny loharanom-baovao tahaka izany raha manana orinasa madinika na vaovao ianao. Na izany aza, mbola azo atao izany, ary hilaza ny antony. Araho fotsiny ny tetikasa fanorenana rohy etsy ambany, ary hanomboka hitombo ny fifamoivoizana.
Ahoana no handefasana ny tranokalanao ho an'ny backlinks?
Ho mpampiasa mavitrika amin'ny Quora
Quora dia loharanom-panazavana mahomby izay natao hanampiana ireo mpampiasa hamaha ny olana. Izy io dia malalaka sy malalaka ho an'ny sehatra ho an'ny mpijery malalaka izay manome tombontsoa ho an'ireo mpampiasa sy webmaster. Ny zava-drehetra tokony hataonao dia ny hitadiavana teny ifanakalozan-kevitra mifandraika amin'ny tsenanao. Ho vokatr'izany dia hahita olona an-jatony maro no tsy mamaly fanontaniana. Avy eo dia miverena amin'ireo olana izay tsapanao fa matihanina, ary raha misy ny fifandraisana manokana ao amin'ny tranokalanao izay afaka manampy amin'ny fampahalalana bebe kokoa momba ny lohahevitra, dia asio rohy.
Hanampy anao amin'ny HARO
Loharano avo lenta hafa izay ahafahanao mamorona rindran-kihezan-doko sy kalitao HARO (manampy ny mpanao gazety ianao). Sehatra iray ahafahan'ny mpanao gazety mandeha izy rehefa mila fanampiana izy ireo. Mamoaka ny fanontaniany izy ireo, ary raha azonao atao ny manome valiny mahasoa sy mahasoa azy ireo, dia mahazo fotoana hahafahana mahazo milina maimaim-poana ianao. Ny tetika fandinihana ny fanontaniana mifanaraka amin'izany dia mitovitovy amin'ny Quora. Mila manao fikarohana ianao amin'ny fikarohana voalazanao amin'ny taranjanao ary valio fotsiny ireo fanontaniana izay tsapanao fa mahomby. Raha mahita ny kalitaon'ny valiny ny mpanao gazety, dia hamoaka izany amin'ny tranokalam-baovao na gazetiboky toy ny Forbes, Search Engine Journal na Entrepreneur. Vokatr'izany dia hahazo siramamy azo ampiasaina ianao ary mikirakira fifamoivoizana. Mazava ho azy fa tsy hahazo rohy amin'ny rohy amin'ity tranonkala vaovao ity ianao, saingy azo antoka fa hanatsara ny rohy momba ny rohy.